Ajụjụ ọnụ maka ịzụta ndị na-anya ụgbọ ala 73 na Mersin dechara | RayHaber
HomeTurkeyMediterranean Region33 MersinAjuju ajuju maka forzụta Ndi Nkwọ ụgbọ ala 73 na Mersin
23 / 10 / 2019 33 Mersin, Mediterranean Region, General, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Turkey
Ajuju ndi mmadu maka izu ahia nke soforu na Mersin
Obodo Mersin Metropolitan, onye ọkwọ ụgbọ ala 73 mezuru ajụjụ ọnụ ndị ahụ mgbe ọkwa ahụ gasịrị. N'etiti ngwa 1003 niile, Obodo ukwu ga - akpọrọ ndị ọkwọ ụgbọ ala 73, tinyere ụmụ nwanyị.
Ebumnuche iduzi ụmụ amaala Mersin ka ọ banye n'ụgbọ njem ọha na iji nye ha ọrụ njem ngwa ngwa, nchekwa na nke dị mma, ndị isi obodo ga-ahọrọ ndị ọkwọ ụgbọ ala nwanyị 73 na onye ọkwọ ụgbọala 25 site na nwoke ọkwọ ụgbọala.
Ekwesịrị iji ụbọchị nke 26 ma gafere 66
Site na mkpochapu mgbasa ozi a, ndị mepere emepe duziri ajụjụ ọnụ ndị kọmitii gụnyere ndị isi nke Ngalaba Transportgbọ njem wee mụta ike dị na ngalaba ahụ. Ajụjụ ọnụ nke ọma gbasara ndị ọkwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala, n’oge na-adịghị anya mmalite nke ọrụ, onye na-eduzi ya ga-amalite ịma jijiji. N’akụkụ 1003, ngwa 40 mejupụtara ụmụ nwanyị na-azọ ọhụụ na ngụkọta nke ụmụ nwanyị 25 ga-arụ ọrụ na ngalaba a.
Chauffeurs ga-etolite karịa 26 ma ghara gafere 66. Ndị ọkwọ ụgbọala ga-enwerịrị SRC1 na SRC2 akwụkwọ ikike, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala ochie E, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala D yana akwụkwọ ọgụgụ isi.
Topçuoğlu: "Anyị na-azụta ihe ndị a n'ebumnuche nke iduzi ụmụ amaala anyị na njem ọha" Ersan Topçuoğlu, Onye isi Ngalaba Transportgbọ njem kwuru na ha ga-eji mkpokọta ụgbọ ala 73 ngụkọta dịka Onyeisi ctolọ Ọrụ Transportgbọ njem Ọha, Büyük 25 bụ nwanyị na ndị ọrụ 48. Anyị ga-ewe ọrụ. Anyị ga-atụle ndị ọkwọ ụgbọala ndị a dị ka nkwalite nke mbụ maka ụgbọ ala anyị 73, nke ezubere ka ewere mgbe Afọ Ọhụrụ gasịrị, were ngwa ndị ahụ wee bido ndị chọrọ ọrụ ngwa ngwa. Anyị na-azụta ihe ndị a maka ebumnuche anyị idu ụmụ amaala anyị ka ọ bụrụ njem ụgbọ njem ọha na maka ngwa ngwa, nchekwa na nchekwa nke ọha. "
Topçuoğlu, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, ihe odide SRC, na ọkachasị na nkwukọrịta nke ndị ọkwọ ụgbọala ga-elebara ndị aga-ekwu kwuru.
Kılıç: “Mama m na papa m bụ ndị ọkwọ ụgbọala”
Betül Arslan Kılıç batara na ajụjụ ọnụ ahụ wee sị na ọ masịrị ya ịnọ n'okporo ụzọ ma chọọ ije ozi na Obodo ma tinye akwụkwọ maka ịzụta onye na-anya bọs. Womenmụ nwanyị anyị na-eche na ha enweghị ike ịbụ ọkwọ ụgbọ ala obodo. Anaghị m emegide ya. Mama m na papa m bụ ndị na-anya gwongworo. Ọ bụrụ na uche Chukwu, aga m enwe ike ịbanye na onye ọkwọ ụgbọ ala n'obodo ma gọzie Chineke, ”ka o kwuru.
Shur: X nwere afọ 30 nke ahụrụ ọrụ na chauffeuring ”
Gönül Şur, 58 kwuru na ya hụrụ mkpọsa mgbasa ozi na mgbasa ozi mgbasa ozi ma tinye ya n'ọrụ. "Achọrọ m ya. Anyị enweghị ike ịkwụ ụgwọ otu ụgwọ ọrụ. Tagzi, minibus, onye na-akpo moto. Enwere m afọ 30 nke ahụrụ ọrụ na chauffeuring. Obi dị m ụtọ nke ukwuu na ụmụ nwanyị nwere ike itinye akwụkwọ, yabụ m bịara n'ihi na atụkwasara m obi. Ọ ga-amasị m ikele Onye isi ala anyị Vahap Seçer maka inye anyị ohere a ..
Elif Kafa, nne nke 2 nke umuaka kwuru na ha nwere obi uto nke ukwuu na umunwanyi nwere ike itinye akwukwo maka onye ugboala. Atụrụ m anya na ọ dị mma. Abụbu m onye ọkwọ ụgbọala tupu oge eruo. Drivingkwọ ụgbọ ala na-amasị m. M na-eme ike m mgbe niile. Enwere m olileanya na anyị ga-aga n'ihu n'ụzọ a ma ọ bụrụ na akụnụba a ”
Kafa kwuru na ọ bụrụ na a gbara ajụjụ ọnụ ahụ ziri ezi ma nwee ikike ịnya ọkwọ ụgbọ ala, Kafa kwuru, "Dịka nwanyị, enwere m mmetụta nke nsọpụrụ dịka nne. M na-akwado mmadụ niile ka ha mee ihe masịrị ya. Shouldmụ nwanyị kwesịrị inwe obi ike mgbe niile. Hapu ha ka ha mee ihe ha choro ime. M na-ele ndụ anya. Ọ bụrụ na anyị nyere ụmụ nwanyị aka, anyị nwere ike ime ihe ọ bụla ”.
Aka: "Nihi na anyi bu ndi nwanyi ji akpacha ugwu ugwu ma nwee ezi uche, amam n’aka na anyi ga eme nke oma karie oru a."
Şerife Alkış kwuru na ọ hụrụ ọfụma na ọ chọrọ ime ya. Enwere m ịhụnanya na chauffeering ma ọ bụ nrọ nwata m. Amaara m na ọ bụ nrọ a na-apụghị iru. Ma mgbe m hụrụ ndị enyi nwanyị nọ na mpaghara ndị ọzọ, m na-alụ ọgụ n'ihi na echere m na nrọ a nwere ike ịdị adị n'ezie na enwere m olileanya na ọ ga-emezu. Achọrọ m ime nke a. Ahụrụ m ya n'anya, ọ na-emekwa ka ndị mmadụ marakwuo mma site n'ịhụ ihe ha na-eme n'anya. Ndị mmadụ, ndị anyị ga na-arụ ọrụ karịa. Ebe ọ bụ na anyị bụ ụmụ nwanyị nwere ezi nkwanye ùgwù na nghọta karị, ejiri m n’aka na anyị ga-adị mma ma na-eme nke ọma n’ọrụ a. Ọ ga-amasị m ikele Onye isi ala anyị maka inye anyị ụmụ nwanyị ụdị ohere a ..
Ka emechara mata aha ha n’ajụjụ ọnụ a, a ga-elebara ndị ọkwọ ụgbọala ahụ ule ịnya ụgbọ ala ga-eme nke ọma n’agha ndị mbanye ndị ọkwọ ụgbọala ga-aga nke ọma.
Azizi City Bus Driver na Mersin, A zọpụtara ndụ
Amamọkwa nro: Ihe nchekwa ụmụaka - ikuku n'ime / ikuku n'èzí…
Uysal, Ndị Nnochite Transportgbọ njem na ve
Drigbọ na-akpachapụ anya na TransportationPark, Kitten
Obodo Mersin Metropolitan